धरानमा दोस्रो अशोक स्मृति रनिङ कप बास्केटबल प्रतियोगिता हुने – दिव्य रोशनी अनलाईन
धरानमा दोस्रो अशोक स्मृति रनिङ कप बास्केटबल प्रतियोगिता हुने
दिव्य रोशनी(धरान)/ धरानमा दोस्रो अशोक स्मृति रनिङ कप बास्केटबल प्रतियोगिताको आयोजना हुने भएको छ।
विपी प्रतिष्ठानभित्र रहेका डायनामिक युथ क्लवको आयोजना, हाम्रो कलेक्सनको संयोजन तथा पूर्व राष्ट्रिय बास्केटबल खेलाडी रवि वास्फेरका बुवा स्व. अशोक वास्फोरको स्मृतिमा प्रतियोगिताको आयोजना हुन लागेको हो। आगामी माघ १ गतेदेखी आयोजना हुने बास्केटबल प्रतियोगिताको बारेमा आज विहिवार धरानमा एक पत्रकार सम्म्ेलनको आयोजना गरी जानकारी दिईएको थियो। पत्रकार सम्मेलनका प्रतियोगिताका संयोजक रवि वास्फोरले पूर्व खेलाडी एवं विपी प्रतिष्ठानका कर्मचारी समेत रहेका स्व. अशोक वास्फोरको सम्मानमा प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागिएको बताए। उनले यस प्रतियोगिताले स्व. अशोक वास्फोरको सम्मान संगै बास्केटबल खेलाडीको प्रतिभा एवं बास्केटबल खेल विकासमा पनि सहयोग पुर्याउने बताए।
प्रतियोगितामा विर्तामोड, दमक, विराटनगर, तरहरा, धरान लगायतबाट १० टिमले सहभागिता जनाउने भएको छ। प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीहरुलाई नगद ५५ हजार ५ सय ५५ सहित ट्रफि, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छभने दोश्रो हुने टिमले नगद २५ हजार ५ सय ५५ रुपैया सहित ट्रफि, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछ। यसैगरी उत्कृष्ट खेलाडीले ट्रफि र प्रमाणपत्र सहित बास्केटबल जुत्ता पाउनेछन्भने म्यानअफ दि म्याचलाईलाई नगद ३ हजार सहित ट्रफि र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ। यसैगरी उदयीमान खेलाडीले ट्रफि, प्रमाणपत्र र गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ।
यसैगरी प्रतियोगिताको फाईनल खेल अघि सहभागी खेलाडीहरु बिच थ्री पोईन्ट कम्पिटिसन समेत गराईनेभने विजेता खेलाडीले नगद पुरस्कार र ट्रफि, प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। विपी प्रतिष्ठानको बास्केटबल कोर्टमा हुने प्रतियोगिताको फाईनल खेल माघ ९ गते हुने आयोजकले जनाएको छ।
← बुधबार ४३५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
धरानका मूख्य खानेपानीको ट्रंक लाईनको मर्मत कार्य सुरु →
धरान गल्फ क्लबको अध्यक्षमा विरेन्द्र